Siyaasiyi Taageersan Garabka Col. C/Llahi Yusuf oo Daryeelxumo Caafimaad Awgeed Ugu Geeriyoodey Magaalada Jowhar.
Magaalada Jowhar ayaa waxaa ku geeriyoodey allaha u naxariiste nin la yiraahdo C/Qaadir Axmed Jibaar. Ninkaas oo ka soo jeeda gobolka Bay ayaa da’diisa lagu qiyaasay inta u dhexeysa 50 iyo 60 sanno jiro.
Marxuumkaas geeriyooday ayaa wuxuu la il darnaa xanuun loo maleynayo inuu la xiriiro xagga dhiiga. degmada Jowhar oo xaruun u ah Col. C/llahi ayeysan jirin wax gargaar caafimaada oo dadka buka naftooda lagu badbaadin karo. Isbitaalada magaalada ayaan lahayn qalab, daawo iyo dhaqatiir aqoon u leh cudurada kala duwan.
Siyaasiyiinta taageersan garabka Col. C/llahi ee ku sugan Jowhar ayaa geerida ku timid C/qaadir Jibaar waxey ku dhalisay cabsi. Inta badan siyaasiyiintaas ayaa waxa isugu darsamay qaniinka kaneecada iyo caburka dhimirka iyagoo noloshoodii ay ku soo koobantay maqaayadaha laga qaxweeyo iyo masaajidyada lagu qabto xuska allabariyada.
Col. C/llahi ayaa u saaray aaska marxuumkaas Gudi gaar ah oo heer qarana, isaga oo ka gaabsaday walaaca kooxdiisu ay ka muujiyeen caafimaaddarada Jowhar iyo gargaar la’aanta dhinaca daryeelka caafimaadka, gaar ahaan waayeelada bukaanada garabkan oo ay ku badan tahay cudurada wadnaha iyo dhiiga.
Geerida Cabdulqaadir Axmed Jibaar ayaa horseedi karta in siyaasiyiin badan ay isaga noqdaan degaanadii ay ka soo jeedeen marba haddii ay adag tahay gargaarka caafimaad ee lagu badbaadin karo siyaasiyiinta xanuunsan. Waxaan shaki ku jirin inuusan marxuun Jibaar ahayn keli ahaan kan ku geeriyooda Jowhar laakiin ay ku soo daba jiraan siyaasiyiin aan yareyn oo daryeelxumo dhaqaale awgeed u tegey degmada Jowhar, haddana aan ku haysan dhaqaale iyo caafimaad midna.